चीनमा अहिले नयाँ ट्रेन्डले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । आफूलाई वास्तविक महिला प्रमाणित गर्ने नाममा महिलाहरुले स्तनमूनी पेन च्यापेर सेल्फी अपलोड गर्न थालेका छन् । उपाय सजिलो छ , त्यसका लागि स्तनमूनि पेन वा पेन्सिल राख्नुहोस् । त्यहाँ पेन वा पेन्सिल त्यतिकै रह्यो भने तपाई वास्तविक महिला हुनुभयो । सेल्फी…
लण्डन – सन् २०१२ मा कार दुर्घटनाका क्रममा सारा नज्म गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । दिमागमा चोट लागेपछि उनी लामो समय प्यारालाइसिस भएर निश्क्रिय जीवन बाँच्न थिइन् । डाक्टरले उनलाई ठीक हुन गाह्रो पर्ने बताएका थिए । ठीक भइहाले पनि उनी कहिल्यै हिडडूल गर्न नसक्ने डाक्टरको दाबी थियो । त्यतिबेला…
पोखरा, ९ माघ । गुरुङ फिल्म अवार्ड अन्तरगत एसएमएस भोटिङबाट छनौट हुने चर्चित फिल्म, अभिनेता र अभिनेत्री विधाका लागि ‘भोटिङ कोड’ सार्वजनिक भएको छ । अवार्ड कार्यक्रमको आयोजक संस्था जक्शन ग्रुप (जक्शन डटकम)ले ‘भोटिङ कोड’ शुक्रबारदेखि लागु हुने गरि सार्वजनिक गरेको हो । तीन वटा शिर्षकमा खुला गरिएको एसएमएस भोटिङ फागुनको १३ गतेसम्मका लागि…
अमिताभ बच्चन भारतकै सबैभन्दा शक्तिशाली
मुम्बई, माघ ९ / अभिताभ बच्चनको लोकप्रियता झन्झन् चुलिँदो छ । हालै ‘अतुल्य भारत’ का ब्राण्ड एम्बेसडर बनेका बच्च्चन ट्विटरमा भारतकै सबैभन्दा शक्तिशाली देखिएका छन् । ट्विटरमा उनलाई पछ्याउनेको संख्या १.९ करोड पुगेको छ । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीभन्दा अगाडी छन् । मोदीलाई १.७५ करोडले पछ्याएका छन् । मोदीपछि बलिउडका…
The photo, titled “Potato #345 (2010),” is by photographer Kevin Abosch, who charges huge fees to shoot portraits of famous business people in the Silicon Valley tech industry. Business Insider reports that Abosch’s “iconic black backdrop” portraits have becomeasort of status symbol among the elites of business and entertainment —…
पोखरा, माघ ८ । चैत्र २६ गते प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘नाइ नभन्नु ल ४’ को गित सार्वजनिक गरिएको छ । चिया कफी बोलको गितको भिडियो शुक्रबार युटुव मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । बिकास आचार्यको निर्देशनमा बनेको फिल्मका निर्माता हुन् दिनेश पोखरेल र हरिबोल भण्डारी । गितमा कृष्णहरि बराल, बिकास…
एजेन्सी– अभिनेत्री करिना कपुरले आफ्ना व्यायफ्रेन्ड शाहिद कपुरलाई धोका दिएर सैफ अलि खानसँग विवाह गरिन् । आफ्नो उमेर मिल्दो शाहिदलाई करिनाले छाड्नुको एउटा मात्रै कारण सैफ अलिसँग भएको धन थियो । करिना कपुर मात्रै होइन धनसम्पत्तिका लागि बुढा, एकल, अमिल्दो जस्तालाई पनि अंगाल्ने धेरै अभिनेत्री वलिउडमा छन् । १. टिना…
ओम,सन्तोष र योगेशको '' रेशम फिरिरी झिम्के परेली '' (भिडियो)
पोखरा / गण्डकी तारा २०७० का विजेता गायक ओम गुरुङ र संचारकर्मी तथा गायक सन्तोष बस्यालको आवाज रहेको चर्चित संगीतकार गायक योगेश काजी बिसीको शब्द / संगीतमा संगीतप्रेमी एवम निर्माता राजु बास्तोला तथा प्रकाश बास्तोलाको लगानी तथा चर्चित निर्देशक बिशाल भण्डारीको निर्देशनमा निर्माण भएको गीत ''रेशम फिरिरी झिम्के परेली '' को बुधवार…
माधब भुसाल ‘गल्र्सं आर लाइक चिविङ गम,स्विट एट द बिगिनिङ डल एट द इण्ड ।’ यो डाइलग युवाहरुमाझ यतिबेला चर्चित छ । भुवन केसीको निर्देशन र निर्माणमा बनेको यस फिल्मको ट्रेलर सात लाख बढीले सामाजिक संजाल मार्फत हेरिसकेका छन् । जसमा अनमोल केसी र सम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह देखिएका छन्…
कमल थापालाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको समर्थन
पोखराको पर्यटकीय केन्दमा भिषण आगोलागी, २ करोड बढीको क्षती (Photo /Video) Features.
युरोकप उपाधि कुन देशले जित्ला ? रोनाल्डो भन्छन्, 'उपाधिका लागि फ्रान्स बढी लायक छ'